गायकको ‘ठगी’ धन्दा : पूर्वप्रधानमन्त्री र मिडियालाई झुक्याउँदै ४ लाख हजम !
सुवास भट्ट/अशोक महर्जन
काठमाडौं, ५ असार– गायक हेमन मोक्तानले एचआईभी पीडित बच्चाहरूको नाममा उठेको ४ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको छ । एचआईभीपीडित बालबालिकाको तर्फबाट बेबी लाइफ होमले अपराध महाशाखा टेकुमा उजुरी दर्ता गरेको हो ।
बेबी लाइफ होममा रहेका २३ जना एचआईभी पीडित बालबालिकालाई सहयोग गर्ने भन्दै कतारमा सांगीतिक कार्यक्रम भएको थियो । त्यो कार्यक्रबाट उठेको ४ लाख १६ हजार ७५ रुपैयाँ अहिलेसम्म संस्थालाई उपलब्ध नगराएको भन्दै गायक मोक्तानविरुद्ध ठगीको उजुरी परेको छ ।
एचआईभी पीडित बालबालिकालाई सहयोग गर्ने भन्दै गायक मोक्तानले बच्चाहरूको भिडियो र फोटो खिचेर लगेको बेबी लाइफ होमका सञ्चालक राजकुमार पुनले बताए ।
बच्चाहरूको सहयोगको लागि भनेर गायक हेमनले २०७२ साल पौष २१ गते बागबजारस्थित हार्दिक होटेलमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित विभिन्न गायकहरूको उपस्थितिमा ‘फर्माइस’ नामक गीति एल्बम विमोचन गराएका थिए ।
एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमार्फत नक्कली चेक हस्तान्तरण गराउँदै गायक हेमन
उक्त फर्माइस एल्बम बिक्रीबाट उठेको सम्पूर्ण रकम एचआईभीपीडित बालबालिकाको सहयोगको लागि दिने गायक हेमनले घोषणा गरेका थिए ।
कार्र्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सहयोगस्वरूप ५ सय रुपैयाँ तिरेर एल्बमको सीडी किनेका थिए ।
हेमनले कतारमा ती बालबालिकाको सहयोगको लागि भनेर सर्लाही प्रवासी सेवा समाजको आयोजनामा सांगीतिक कार्यक्रम गरे । उक्त कार्यक्रमबाट सर्लाही प्रवासी सेवा समाजका तर्फबाट १ लाख ३५ हजार रुपैयाँसहित अन्य दाताबाट हेमनले ४ लाख १६ हजार ७५ रुपैयाँ संकलन गरेको विभिन्न छापा तथा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो ।
कार्यक्रम नै नक्कली !
गायक हेमनले कतारमा उठेको रकम हस्तान्तरण गर्ने भन्दै प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा २०७३ साल असोज १६ गते हार्दिक होटलमा कार्यक्रमको आयोजना गरे ।
त्यो कार्यक्रममा उनले ४ लाख १६ हजार ७५ रुपैयाँ सनराइज बैंकमार्फत सम्बन्धित संस्थालाई दिएको घोषणा गरे । तर उनले डमी चेक बनाएर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालबाट हस्तान्तरण गराएको खुलेको छ । चेक लिन बेबी लाइफ होमका कुनै प्रतिनिधि उपस्थित भएनन् ।
खासमा गायक हेमनले बेबी लाइफ होमका राजकुमार पुनसँग ‘अहिलेलाई पैसा छैन, पछि तपाईंहरूलाई पैसा मिलाउँला, अहिलेलाई डमी चेक भएपनि लिन कार्यक्रममा उपस्थित हुनप–यो’ भनी अनुरोध गरेको खुलेको छ ।
‘त्यस्तो अनुरोध सुनेपछि हामी डमी चेक लिन कार्यक्रममा उपस्थित भएनौं,’ उक्त होमका राजकुमार पुुनले लोकान्तरसँग भने ।
तर कार्यक्रममा बेबी लाइफ होमको प्रतिनिधि भन्दै रिना शाही नामकी एक युवतीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीले चेक हस्तान्तरण गरेको पत्ता लागेको छ । गायक हेमनले एचआईभीपीडित बालबालिकालाई सहयोग गरेको भन्दै विभिन्न छापा तथा अनलाइनमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र मिडियालाई गायक हेमनले नमज्जैले झुक्काएको स्पष्ट देखिन्छ ।
कार्यक्रममा बेबी लाइफ होमका कुनै प्रतिनिधिसमेत उपस्थित नभएको र नेता नेपालमार्फत हस्तान्तरण गर्न लगाइएको चेक डमी भएको मिडियाले चालै पाएनन् । गायक हेमनको ठगीको शैली नेता नेपालले समेत चाल पाउन नसकेको देखिएको छ ।
त्यही कार्यक्रममा नेता नेपालले हेमन मोक्तान फाउन्डेसन संस्थाको उद्घाटन समेत गरेका थिए । उक्त संस्था अहिलेसम्म दर्ता भए/नभएको पुष्टि हुन सकेको छैन ।
उता गायक हेमनले भने आफूलाई राजकुमार पुनले धोका दिएको आरोप लगाए ।
‘कार्यक्रममा आउँछु भनेका राजकुमारले कार्यक्रममको अन्तिम समयमा धोका दिए,’ उनले लोकान्तरसँग भने । हेमन मोक्तान फाउन्डेसन भने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको गायक हेमनले दाबी गरे ।
विभिन्न मिडियामा गायक हेमनले ४ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम बेबी लाइफ होमका एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई सहयोग गरेको समाचार छापिएको थियो ।
एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई आफूहरूले दिएको रकम पुग्यो किन पुग्ने भनेर कतारमा रहेको सर्लाही प्रवासी सेवा समाजका अध्यक्ष पेम्बा गेलानले बेबी लाइफ होमका सञ्चालक राजकुमार पुनलाई इमेल पठाएका थिए ।
राजकुमारले उनलाई अहिलेसम्म रकम नपाएको जवाफ पठाए । रकम नपाएको खबर पाएपछि गायक हेमनसँग सर्लाही प्रवासी सेवा समाजका सदस्यहरू रुष्ट बनेका छन् ।
कतारमा गएर पैसा उठाएको समाचार आएपछि बेबी लाइफ होमका सञ्चालक राजकुमारले एचआईभी संक्रमित बालबालिकाको नाममा उठेको रकम संस्थालाई उपलब्ध गराउन पटकपटक आग्रह गरेका थिए । तर गायक हेमनले अक्षयकोषको स्थापना गरेर मात्रै रकम हस्तान्तरण गर्ने अडान लिएका लिँदै आएका थिए ।
‘नक्कली कार्यक्रम गरेर रकम हस्तान्तरण गरेको दाबी गरेको पनि महिनौं बितिसकेको छ । तर यसबीचमा न हेमनले अक्षयकोष स्थापनका लागि कुनै पहल गरे, न संस्थाको नाममा पैसा नै जम्मा गरे,’ होमका सञ्चालक राजकुमार पुनले थपे ।
राजकुमारले रकम उपलब्ध गराउन पटकपटक ताकेता गरेपछि गायक हेमनले २०७३ साल जेठ २१ गते सनराइज बैंकको नाममा रहेको एक लाख २८ हजार रुपैयाँको चेक दिएका थिए ।
बेबी लाइफलाई गायक हेमन दिएको पैसा नभएको चेक ।
‘चेक लिएर बेबी लाइफको सिभिल बैंकस्थित एकाउन्टमा जम्मा गर्न खोज्दा भने उक्त चेक बाउन्स भयो । खातामा पैसा नै नरहेको बैंकले जानकारी दियो । उक्त चेक लिएर तीनपटकसम्म बैंक जाँदा पनि खातामा पैसा भेटिएन र तीनपटकसम्म नै हेमनले दिएको चेक बाउन्स भयो,’ पुनको भनाइ छ ।
राजकुमारले पटकपटक रकम दिन आग्रह गरेको र टार्न नसकेर पैसा नभएको चेक दिएको गायक हेमनले स्वीकार गरे ।
‘पैसा नभएको चेक दिएर मैले गल्ती गरें,’ गायक हेमनले लोकान्तरसँग भने ।
यस विषयमा लोकान्तरले विस्तृत जानकारी माग्दा गायक हेमनले बेबी लाइफ होमलाई आफूले अक्षयकोषमार्फत मात्रै पैसा दिने र संस्थाको नाममा पैसा नदिने बताए ।
गायक हेमनले बेबी लाइफ होमलाई दिएको बाउन्स भएको चेक ।
हेमनले अक्षयकोष स्थापना गर्ने पटकपटक बताएपनि त्यसका लागि कुनै पहल गरेका छैनन् । कतारमा रहेका प्रवासी नेपालीले एचआईभीपीडित बालबालिकाको नाममा दिएको ४ लाख १६ हजार ७५ रुपैयाँ पनि सम्बन्धित संस्थाका बालबालिकालाई दिएका छैनन् ।
अक्षयकोष स्थापना गर्न नसकेकै कारण बच्चाहरूको नाममा दिन लागेको पैसा दिन नसकेको हेमनको दाबी छ । एचआईभी पीडित बालबालिकाको नाममा उठेको रकम अहिलेसम्म नपाएको भन्दै बेबी लाइफ होमका सञ्चालक पुन अहिले केन्द्रीय बालकल्याण परिषद् पुगेका छन् ।
असार ५, २०७४ मा प्रकाशित